Ithegi: Ukuthengisa umxholo | Martech Zone
Ithegi: Ukuthengisa umxholo
Ubhubhane uphazamise kakhulu iindlela zentengiso zabathengi njengoko amashishini ehlengahlengisa kwizenzo zikarhulumente ezithathiweyo ukuzama ukuthintela ukusasazeka okukhawulezileyo kwe-COVID-19. Njengoko iinkomfa bezivaliwe, abathengi be-B2B bafudusele kwi-intanethi umxholo kunye nezixhobo ezibonakalayo ukubanceda ngokwamanqanaba ohambo lomthengi we-B2B. Iqela elikwiNtengiso yeDijithali kwiiPhilippines libeke ndawonye le infographic, B2B yeNtengiso yeNtengiso yeTrends ngo-2021 eqhuba iindlela ezi-7 eziphambili zendlela umxholo weB2B
Iimpazamo ezili-11 zokuPhepha ngePhulo lakho lokuThengisa nge-imeyile
NgoMvulo, Matshi 1, 2021 NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 Douglas Karr
Sisoloko sabelana ngezinto ezisebenzayo ngentengiso ye-imeyile, kodwa njani malunga nezinto ezingasebenziyo? Ewe, i-imeyile yeCitipost ibeka i-infographic eqinileyo, izinto ezili-10 ongafanele ukuba uzibandakanye kwiPhulo lakho le-imeyile elinikezela ngeenkcukacha zokuthintela xa ubhala okanye uyila ii-imeyile zakho. Ukuba ufuna ukuphumelela ngokuthengisa nge-imeyile, Nazi ezinye zeefeksi-pas eziphezulu ekufuneka uqiniseke ngazo ukuba uyaziphepha xa kuziwa kwizinto ongafanele ukuzibandakanya